Agbanyeghi na odeshi na-eshi ndị mmadụ ka kwenyere na ya - BBC News Ìgbò
Agbanyeghi na odeshi na-eshi ndị mmadụ ka kwenyere na ya
5 Julaị 2018
Nkenke aha onyonyo Ọtụtụ ndị na-anwa mgbo egbe na-eji udiri egbe a, bụ kari nke eji agba nta n'ime obodo
Otu akụkọ ndị mmadụ na-atụ ndị mmadụ n'anya na soshal midia bụ na otu nwoke aha ya bụ Chinaka Adoezuwe nwụrụ mgbe enyi ya nwoke gbara ya egbe n'obodo Umuozu Ugiri, nke dị na okpuru ọchịchi Isiala Mbano n'Imo steeti.
Akukọ nke ọtụtụ ụlọ ntaakụkọ bu, kwuru na Adoezuwe, bụ onye dibia, nwụrụ mgbe ọ na-achọ ịmata ka ọgwụ odeshi ọ gwọrọ ọ dị ire.
Onye gbara egbe a bụ Chukwudi Ijezie, bu onye Adoezuwe gwọọrọ ọgwụ odeshi a.
Agbanyeghị na Ijezie kwuru na ọ bụ Adoezuwe sị ya gbaa ya egbe ahu, ndị uweojii kpara ya aka maka ogbugbu mmadụ.
Agbanyeghị na ọ na ada ka akuko ifo, ọbụghị ihe ọhụrụ na mpaghara ọwụwa anyanwu makana odeshi bụ ihe ụfọdụ ndị na-achọsị ike.
N'afọ 2012, n'obodo Agbatse nke dị n'okpuru ochịchị Kwande na Benue steeti, Ornguga Adega gbagbụru otu nwa nwoke o nwere ka ọ na-eme ka ọ nwale ma odeshi ya ọ na-arụ ọrụ ọfụma.
N'akụkọ ụlọ ntaakụkọ Vanguard dere mgbe o mere, ha na-akọ na Adega gotere odeshi n'aka dibia were tee ya n'ụkwụ nwa ya, tupu ọ tụkwasị ya egbe, gbarịe nwata ụkwụ. Nwata ahụ dị afo 10, nwụrụ tupu ndi dibia Bekee rute ya nso.
Nkenke aha onyonyo Ọtụtụ mmadụ kwenyere na ọgwụ na-ere
Ọzọ dikwa ka ibe ya mere n'ọnwa Disemba nke afọ gara aga n'obodo Kakumi nke dị n'okpuru ọchịchị Bakori na Katsina steeti mgbe Usman Saidu dị afọ 45 si ka ya leta ka odeshi ọ gwọrọ Aliyu Yahuza ọ ga-ere.
Ka Yahuza ṅụchara ọgwụ a, Saidu tụkwasara ya egbe were zi.
N'ime akụkọ ndị a niile, ndị uweojii kwusiri ike na ndị gbara egbe gbụru ndị a dara iwu, nke mere aka jiri jide ha.
Mana, ihe akụkọ ndị a pụtara bụ na ụfọdụ ndị mmadụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ kwenyere na ha nwereike nweta nchekwa site n'aka odeshi ndị dịbịa mere ha.
Ọzọkwa bụ na ndị mmadụ ka nwekwara ofufe n'ọgwụ Igbo agbanyeghị na udiri akụkọ a na-apụta.
Onye dọkinta Bekee na-ahu maka ụbụrụ na 'National Neuropsychiatric Hospital' di na Legọs bụ Dami Ajayi kwuru na ya echeghi na o nwere etu sayensi ga-eji kọwa ihe mere ndị mmadụ ji nwe udiri ntụkwasị obi n'ebe odeshi nọ, agbanyeghi na agba ọhụrụ nwere ike a na-eyi ya ka uwe.
Nkenke aha onyonyo Ndị kwenyere na dibia Igbo karịrị na mpaghara anyanwu a
Ajayi kwuru na ihe a ndị mmadu na-eme na-egosi na ha ka nwere nchekwube na ngborọgwụ Igbo.
O kwukwara na udiri ihe a na-eme n'udi dị icheiche dịka ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ ndị na-agba ọkpụkpụ Igbo ka nke Bekee mma, nakwa na ọgwụ Igbo ka nke Bekee mma maka ụfọdụ ọrịa.
N'okwu dọkinta Ajayi, anyị ka ga na ahu udiri ihe a na mpaghara ọwụwa anyanwụ.
Odeshi na-eshi, mana ndị mmadụ ka kwenyere na ya
Otu pati APC ekewala, kedụ ndị n'otu ọhụrụ
Waec Results 2018: Mpụtara ule afọ a agbaala
Ihe kachasị mkpa ịma maka arụ agwọ
25 Mee 2018
Akụkọ kachasị n'abalị a: Atiku chọrọ ịzọ ọkwa onyeisiala n'okpuru PDP n'afọ 2019